Nalalka saxda ah ee quraaradda | Kalluunka
Rosa Sanches | | DIY Aquariums
Aad bay muhiim u tahay in la tixgeliyo tayada nalalka quraaradda, qaasatan hadaan dhir leenahay, si nal sax ah loo helo. Kuwani waxay u baahan yihiin xoog ku filan si ay u awoodaan inay u fuliyaan sawir-qaadista, iyo tayada iftiinka ee ugu dhow sida ugu macquulsan ee ay qorraxda soo baxdo, waxay sidoo kale yareysaa wax soo saarka algae-da badda.
La iftiinka iyo shaandhada waa nolosha nolosha quraaradda si loo ilaaliyo nidaamka deegaanka iyo kalluunka xaaladaha ugu habboon. Waa in maanka lagu hayaa in ahaanshaha meel xiran ay tahay inaan si dabiici ah ula jaanqaadno isla shuruudaha kuwa ay bannaanka ku leeyihiin.
Marka horeba, waa in lagu xisaabtamo taas tayada la mid ma aha tirada iftiinka. Tayada waxaa lagu cabiraa tusmada muujinta midabka maadaama ay tahay awooda laambadu inay ka tarjumeyso midabada sida haddii lagu arkay iftiinka dabiiciga ah. Qaddarkuna wuxuu ka muuqdaa lumen, taas oo ah cabbirka aan ku ogaan karno xaddiga iftiinka uu soo baxayo. Waxay kuxirantahay tirada litir ee quraaradda sidaa darteed waa inaan dhignaa nalka horumarinta saxda ah ee dhirta iyo nidaamka deegaanka.
Markaad dooranayso nalalka, waxaan ogaan karnaa inay jiraan noocyo kala duwan oo nal ah oo suuqa yaalla. Haddaan aragno tanyada dhirtu waxay joojisaa koritaanka, rogrogmada, ama madow, waa inaan ku aragnaa nalalka aquarium-keena maxaa yeelay aad buu u liitaa.
Kuwa ugu caansan waa fluorescent iyo tan ugu badan ee lagu isticmaalo quraaradda, inkasta oo waqtiga la dhaafay ay wax badan isbeddeleen. Tuubo waxaad kuheleysaa lumen iyo watts ka badan kuwii hore. Nalalka dhalaalaya oo leh tuubooyin qalooca ayaa loo isticmaalaa meelaha yaryar.
La laydh horseed ah, Waxaa loo qaadan karaa inay tahay midda ugu hal-abuurka badan suuqa, isticmaalkiisu hooseeyo iyo iftiinkiisa weyn ee biyaha dhexdiisa iyo sidoo kale iftiinkiisa ayaa noqda dalab loogu talagalay dadka jecel badda adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » DIY Aquariums » Nalalka saxda ah ee ku dhex yaal quraaradda quraaradda
Samee aquarium kuu gaar ah